Ndezvipi zvakanakira NFC emagetsi masherufu zvinyorwa
NFC emagetsi masherufu zvinyorwa zvinoshanda kune Wal-Mart, China Zviwanikwa Vanguard, Rainbow, zvimwe zvitoro zvakakura uye matura makuru. Nekuti izvi zvitoro uye matura zvinonyanya kuchengeta zvinhu, manejimendi anodikanwa akaomarara uye akaomarara. Ngatitorei muenzaniso kuratidza kuti ruzivo nemitengo yezvinhu muzvitoro zvikuru zviri kuchinja mazuva ese. Ichapedza zvakanyanya manpower uye zviwanikwa zviwanikwa kana ichichinja ruzivo rwezvinhu. Panguva imwecheteyo, pane mukana mukuru wekukanganisa. Kune chitoro chinoramba chichienderana nenguva, ihwo hurema hunouraya kune vatengesi kuita zvikanganiso mumitengo yezvigadzirwa neruzivo. NFC emagetsi masherufu emavara anogadzirisa zvakakwana dambudziko iri. Nekuti iyo NFC yemagetsi pasherefu chitaridzi inotumirwa nharembozha kune inoenderana data uye mutengo weiyo yakachinja chigadzirwa kune yega yega inoenderana NFC yemagetsi pasherefu chitaridzi, chero bedzi nharembozha ichizungunuka, ruzivo rwunogona kuchinjwa mukati me15 masekondi.
NFC emagetsi masherufu zvinyorwa anofananidzwa nemapepa emitengo ematagi
Inofananidzwa neyechinyakare mapepa emitengo, NFC emagetsi masherufu zvinyorwa zvinogona kuenderera zvichichinja uye nekushandura chigadzirwa chakasiyana uye ruzivo rwechigadzirwa, kudzivisa iyo yakareba manejimendi nguva, inorema kuuraya maitiro, kudhura kwemitengo yezvinhu, Mutengo tag unokanganisa kukanganisa uye zvimwe zvinokanganisa. NFC emagetsi masherufu ekunyora haangogadzirise zvikanganiso zvinokonzerwa nemapepa emitengo emitengo yezvinhu zvekutarisira, asi zvakare kuvandudza masevhisi ezvitoro nezvitoro zvezvitoro. Munguva yakapfuura, pataienda kuchitoro kunotenga zvinhu, tinofanirwa kuverenga nemazvo mutengo uye bhakhodhi yezvinhu, uye tingangotadza kuzviwana. Mutengo wemutengo unoendesa kukutenga kusingafadzi uye kusawirirana kwemutengo mukutenga, izvo zvinoderedza hunhu hwebasa muchitoro. Izvi zvinogona kugadziriswa zvachose neNFC zvemagetsi masherufu zvinyorwa. NFC inogona kuzivisa maneja kuburikidza netiweki, SMS, email, nezvimwewo kuchinja ruzivo nemutengo wezvinhu nenguva, izvo zvisingangogadzirise kunaka kwebasa asi zvakare zvinoderedza zvakanyanya kuoma kwemaneja uye zvinodzivirira zvikanganiso zvisina basa.
Ndeupi musiyano uripo pakati peiyo NFC yemagetsi pasherefu chitaridzi cheiyo yakasanganiswa smart kadhi uye yemagetsi pasherefu chitaridzi pamusika
Iwo emagetsi masherufu zvinyorwa pamusika ndezvekuchinja iyo data nemitengo yezvinhu kuburikidza nekombuta, uye iyo NFC yemagetsi masherufu zvinyorwa zveakabatanidzwa smart kadhi zvigadzirwa zviri nani nemitengo kuburikidza nerunhare mbozha, unova mutsauko mukuru pakati pezviviri . Iyo yekutsiva dhata nguva yeNFC yemagetsi pasherefu chitaridzi cheiyo yakasanganiswa smart kadhi iri gumi nemashanu, uye iyo yemagetsi label yemusika inotora makumi matatu. United Smart Kadhi inonyanya kusimudzira nekushanda kweiyo NFC yemagetsi pasherefu chitupa data APP; hapana chikonzero chekuti mamaneja atakure nharembozha kuti igadzirise data rezvinhu, chero bedzi nharembozha yemaneja iine NFC basa inogona kushanda.